जनमोर्चाकी सांसद थापा भन्छिन्: आफैं काम बिगार्ने अनि यहाँ आएर रोकइकराइ गर्ने? - हिमाल दैनिक
जनमोर्चाकी सांसद थापा भन्छिन्: आफैं काम बिगार्ने अनि यहाँ आएर रोकइकराइ गर्ने?
पोखरा २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:१६
राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई बिश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ ।
बिहिबार प्रदेश सभामा बिश्वासको मतको प्रस्तावमा छलफल गर्ने क्रममा जनमोर्चा प्रदेश संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले ३ वर्ष सरकारमा बस्दा सिन्को नभाँचेको सरकार अहिले संसदमा आएर रोइ कराई नगर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रमा राष्ट्रघातकाे काम गरिरहेकाे र मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा राष्ट्रघातिलाई समर्थन गरेका आरोप लगाएकी छिन्।
‘आफैं काम बिगार्ने अनि यहाँ आएर रोकइकराइ गर्ने ?’ , थापाले सम्बोधनका क्रममा भनिन्, ‘सरकारमा हुँदा केही नगर्ने अनि यहाँ आएर रोइकराइ गर्नुको कुनै औचित्य छैन । यो बन्द गर्नुस् ।’
अघिल्लोकाठमाडाैंमा पानी परे पाेखरामा छाता ओड्नुपर्ने? : प्रमुख सचेतक अधिकारी
पछिल्लोनैतिकताबिनाको सरकारलाई विश्वासको मत दिंदैनौ: जसपा नेता आचार्य